Uphiko Lwezokwelapha Lukhethe Izinkulumo Ezidle UbheduLaw and Management Studies
Abebethula izinkulumo emzuliswaneni wokugcina beneNhloko Yophiko Lwezokwelapha uDkt Nombulelo Magagula.
Uphiko Lwezokwelapha e-UKZN lubambe umzuliswano wokugcina womqhudelwano lapho odokotela abayisithupha bethule izinkulumo ezikhethekile mayelana nokwelashwa kweziguli.
Bekuwukuphothulwa kochungechunge lohlelo lokwethulwa kwezinkulumo obeseludonse unyaka wonke wezokufunda lapho bekukhona odokotela abasengamathwasa kanye nabaphathi bezibhedlela bekhuluma ngezimo abanqwamane nazo ezibhedlela lapho kuqeqeshelwa khona odokotela KwaZulu-Natali
Lezi zithangami bezihanjelwe oSolwazi, abaluleki, abezokwelapha, odokotela abangamathwasa, abaphathi bezibhedlela kanye nabafundi bezokwelapha.
Izinkulumo eziphambili ezintathu ezingeni lodokotela abangamathwasa kanye zezintathu kwabangabaphathi bezibhedlela ziyakhethwa ukuze ziqhudelanele umklomelo ophezulu emzuliswanweni wamanqamu.
Kodokotela abangamathwasa abebehamba phambili ngoDkt Daniel Laas, okhulume ngesimo lapho bekunesifo sokulimala kwezicubu kanye nokulimala kwezinso; uDkt Natasha Lallo ukhulume ngesimo esingajwayelekile esibizwa nge-Hodgkin’s Lymphoma kanye noDkt Saxony Moolman okhulume ngesifo esingajwayelekile esibizwa nge-pituitary gonadotropinoma.
Osebenzela umphakathi esibhedlela i-RK Khan uDkt Dane Perumal ukhulume ngesimo esingajwayelekile esibizwa nge- B-cell lymphoma.
Kubaphathi bezibhedlela abaqokiwe kube uDkt Shaun-Ray Temmers womkhakha wesayensi yokukhiqizwa yigazi esibhedlela i-Grey’s eMgungundlovu yena ukhulume ngesiguli esinesifo i-Sheehan Syndrome kwathi uDkt Kumari Naidoo wakhuluma ngesifo esiwundendende sezinso esihlangene nesamathambo lapho kuvuvuka khona amalunga esihambelana nesifundo sezamathambo nemisipha i-rheumatology.
Kuqokwe izinkulumo zika-Naidoo no-Lalloo njengezidle umhlanganiso.
Ngenkathi kukhishwa imiklomelo, uDkt Bilkish Cassim woMnyango Wezokwelashwa Kwabadala uhalalisele iNhloko Yophiko Lwezokwelapha uDkt Nombulelo Magagula ngokuqokwa kwakhe njengosolwazi Wezokwelapha
Abasebenzi bakulo mkhakha nabo bamukeliswe okokubabonga ngokusebenza kwabo ngokuzinikela enyakeni wonke.